ACTIVE Network uye Viralstyle: Vatori vechikamu Management uye Merchandising | Martech Zone
KUSVIRA Network gore rega inogadzira angangoita mamirioni zana kunyoreswa uye anodarika $ 100B mukubhadhara kwevanopfuura varwi makumi mana nemakumi mashanu ezviitiko uye zviitiko mazana maviri nemazana.
ACTIVE Network® ndiyo inotungamira musika wepasirese wezviitiko nezviitiko, kubatanidza vatori vechikamu uye varongi vezviitiko, uku ichipa risingaenzaniswi bhizinesi njere kuburikidza neyedu indasitiri-inotungamira dhata mhinduro uye nzwisiso chikuva iyo inobatsira varongi kufambisa kuwedzera kutora chikamu uye mari.
Mhando dzakasiyana dzemhinduro dzine mapuratifomu akati wandei uye masevhisi:
ACTIVE Inoshanda - scalable gore chikuva. Yakachengeteka, yakagadzikana, uye inochinjika, ACTIVE Inoshanda inopa masevhisi uye zvivakwa zvekutsigira masangano ehukuru hwese.
Chiitiko Chegore - inopa nzwisiso yezviitiko zvavo zvehungwaru data. Iyo yakasarudzika-yakamisikidzwa mhinduro iyo inokutendera iwe kuti uunze inoitika kutaurirana kune ako vatengi apo iwe uchiteedzera zvavanoita, zvichigonesa kunzwisiswa kwakadzama kwekuti, riini uye sei ivo zvavanoda kunzwa kubva kwauri.
KUSVIRA KUSANGANA - Iyo yakasarudzika-yakamisikidzwa mhinduro iyo inokutendera iwe kuti uunze inoitika kutaurirana kune ako vatengi iwe uchiteedzera zvavanoita, zvichigonesa kunzwisiswa kwakadzama kwekuti, riini uye sei ivo zvavanoda kunzwa kubva kwauri.
Mobile Apps - Yakateedzana nharembozha zviitiko zvinogadzirirwa kuita vanogumisa-vashandisi vanotora chikamu muzviitiko.
Race Nguva Maitiro - RFID nguva dzekugadzirisa dzemadzinza eese saiziTUHF)
ACTIVE Network Solutions Sanganisira
Race Management Software - online online kunyoresa uye kushambadzira mhinduro kubatsira kuwana vazhinji vatori vechikamu, kugadzirisa zviitiko zviri nyore, uye kuvaka yakasimba brand.
Varaidzo Management Software - ACTIVE Net inobatsira mapaki uye ekuvaraidza madhipatimendi, maYMCA, macamp ekumisikidza nzvimbo uye mamwe mahubhu enharaunda enharaunda kuwedzera kutora chikamu nekugadzirisa kunyoreswa, kuchengetedza, zvirongwa, zvivakwa, pane-saiti kutarisa-kupinda, nhengo uye nezvimwe.
Kunze Management Software - KUSHANDISA Kunoshanda kunoendesa pane kutevedzwa uye kudzivirirwa kwenzvimbo dzemisasa, marinas, nzvimbo dzezvakaitika kare, zvivakwa zvekushandisa masikati uye marezinesi emwaka sekuvhima, hove uye kukwasva.
Camp Management Software - Camp Manager inochengeta makambi achimhanya zvakanaka, kusanganisira makiriniki emitambo, makirasi ehunyanzvi, zvirongwa zvedzidzo, uye ese marudzi emisasa, masikati kana husiku. Gadzira mafomu ekunyoresa pamhepo nekukurumidza, wedzera yakabhadara yekugadzirisa kubhadharisa, mhuri auto-kubhadharisa uye tarisa nemadhibhodhi ekuzivisa maturusi.
Sports Management Software - Mhanya mamaligi kubva kune imwe online system - inosanganisira makirabhu, masangano, makirabhu uye yenyika dzinodzora mitumbi yevechidiki nemitambo yevakuru. ACTIVE yemitambo software inomira nyore uye inogonesa kunyoreswa kwevatambi, kubhadhara, maRosters, kuzvipira kutsvaga, kuronga kwemitambo, kuzivisa, uye email kutaurirana.
Hotera uye Zvinonakidza Management Software - Yakabatanidzwa pamhepo uye pa-nzvimbo tekinoroji yemakomo echando uye nzvimbo dzekutandarira, mamuseum, aquariums, uye mapaki ekuvaraidza. Mhanya mashandiro zvirinani nenongedzo-yekutengesa, manejimendi manejimendi, nhengo, uye chikafu nemidziyo yezvinwiwa.
Camp neClass Manager ndeyevadzidzisi uye manejimendi anoda online kirasi kunyoreswa uye kubhadhara, kutaurirana uye data kutaurisa, uye kirasi manejimendi rutsigiro. Shandisa ACTIVE's online kubhadhara uye manejimendi mhinduro yezvikoro.
Viralstyle Merchandise Kubatanidzwa
ACTIVE Network yakabatanidza iri online kunyoresa maitiro ne Viralstyle, kubatsira zviitiko kutyaira mari yekutengesa. KUSVIRA kunoteedzera kushambadzira kwekutengesa chiitiko uye kunounza dhata rekunzwisisa kubatsira varongi kuona yavo yakawedzera mari semhedzisiro yekutengesa kwekutengesa, izvo zvinobatsira varongi kuita sarudzo dzezviitiko zvavo zvemangwana.
Vanoronga zviitiko vanoshandisa iyo yekushambadzira ficha vanogona kusarudza kubva kune anopfuura makumi maviri mbatya uye zvimwe zvingasarudzwa. Iko kusanganisa kunotendera vatengi kurodha zvakagadziriswa dhizaini, logo, zvinyorwa, uye kusarudzwa kwemavara kuitira kuti vatori vechikamu vatenge chinhu chakasarudzika.
Sechikamu cheAITIVE yekuzvipira kuendesa yakazara zviitiko zvehupenyu hwehupenyu manejimendi mhinduro, isu tazivisa iyi yekutengesa ficha kuitira kuti varongi vagone kutarisa nguva yakawanda kupa avo vatori vechikamu yavo yepamusoro chiitiko chiitiko uye shoma nguva pazvinhu zvekutengesa uye yekuverengera kuzadzikiswa zvinhu. Sam Renouf, maneja maneja wemitambo kuAITIVE Network
Kuzivisa: Vatori vechikamu Management, ACTIVE Mabasa chiratidzo chakanyoreswa cheAITIVE Network.
Tags: inoshanda mobile appsinoshanda networkchiitiko chegoremusasa manejimendi softwaremaneja wemusasakirasi manejimendi mhinduroclass manejamukirasi manejachiitiko chechiitikokunyoresa chiitikokuzadzikamerchMerchandiseMobile Appskubhadhara pamhepoonline chikoro kunyoresamanejimendi ekunzekunze manejimendi softwarekutora chikamu manejimendimaneja manejimendimujaho manejimendi softwarekumhanya mhindurokutandara manejimendizororo manejimendi softwareresort manejimendi softwareRFIDzvemitambo manejimendimitambo manejimendi softwareTUHFwemusic